नेपालकै चर्चित कम्पनी डिस होमकाे आईपीओ आउने ! जसबाट हजारौं कमाउन सकिन्छ – Dainik Samchar
नेपालकै चर्चित कम्पनी डिस होमकाे आईपीओ आउने ! जसबाट हजारौं कमाउन सकिन्छ
June 5, 2021 292
डीस होम २०१७ मा पव्लिक कम्पनीमा भएपछि सर्वसाधारणका लागि आईपीओ जारी गर्ने भएकाे छ। गत वर्ष असार २७ गते डिसहोमले २३ लाख ८५ हजार ९ सय २९ कित्ता सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्न धितोपत्र बोर्डसँग अनुमति मागेको थियो। धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिएसँगै डिमहोमले छिट्टै नै आइपीओ जारी गर्ने जनाएको छ।
५८ एचडी र १४९ एसडी च्यानल गरी २०७ टेलिभिजन च्यानल डीस होमले ग्राहकलाई बितरण गर्दै आएको छ। यसका साथै कम्पनीले ७० वटा प्रिमियम च्यानल र आफ्नै १६ वटा आफ्नै च्यानल समेत प्रसारण गर्दै आएको छ। ११ लाख ग्राहक रहेको डिसहोमले ग्रामिणस्तरसम्म स्याटालाइटमार्फत् इन्टरनेट पुर्‍याउने तयारीसमेत अगाडि बढाइरहेको छ। २०१८ मा ३ अर्ब ९५ करोड, २०१९ मा ४ अर्ब २५ करोड र गत वर्ष ५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको कम्पनीले पछिल्ला तीन वर्षमा औषत ३० प्रतिशतका दरले आम्दानी बृद्धि गरेको छ। आम्दानी बढ्दै जाँदा डिसहोमले ऋण भने घटाउँदै लगेको छ। कम्पनीले अघिल्लो आर्थिक बर्षको तुलनामा ७ करोड ८० लाख रुपैयाँ ऋण घटाएर कुल ऋण २ अर्ब २४ करोड ५० लाख पुर्‍याएको छ।
२०२० मा ग्राहकको संख्या ४.०४ प्रतिशतले बढाएको कम्पनीको सब्सक्रिप्सनबाट हुने आम्दानी २४.४९ प्रतिशत पुगेको छ। कम्पनीको पुँजीगत संरचनातर्फ ४७ प्रतिशत हङकङको स्यान्डमाार्टिन इन्टरनेशनल होल्डिङ कम्पनी र बाँकी ५३ प्रतिशत नेपाली लगानीकर्ताको हिस्सामा छ। कम्पनीको अध्यक्षमा हेमराज ढकाल र प्रवन्ध निर्देशकमा सुदिप आचार्य हुन्।
Prevकतारमा शून्य लागतमा ‘फ्री भिसा-टिकट सहित् एक कम्पनीले माग्यो नेपाली कामदार, यस्तो छ तलब सुबिधा :
Nextरोकिराखेको ट्रयाक्टरमा मोटरसाइकल ठो`किँ`दा सैनिक जवानको मृ`त्यु
काठमाडौं आएका अनुपम खेरले गरे पशुपतिको दर्शन
आज चर्चिच अभिनेत्री झरना थापाको जन्मदिन, फेसबुक मार्फत शुभकामनाको ओईरो
सुन्दर भविष्य खोज्न विदेसिएकाहरु बन्द बाकसमा आउँदा कसको मन नरुला ?
बलात्कृत अपांगलाई न्याय मुस्किल (1441)
हरिवंश आचार्यको सुझाव- ‘विदेशमा दुःख गरेर कमाएको पैसा एक टुक्रा जग्गामा खेर नफाल्नुहोस्’ (1430)
आषिश जो कहिलै सकेन्ड भएनन् …जो बाजेको मृ’त्युको १५ दिनमै भगवानको प्यारो भए (1259)